January 26, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo Garoowe ka jeediyey khudbad dheer ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladdo badan oo xilligaan ka jira deegaamada Puntland, isagoona eedayn u jeediyey qaar kamid ah hay’addaha fulinta oo uu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan.
Sharciga waxaa loo samaystay in uu qabto dadka xun ama mufsiddinta ah ee ku xad gudbaaya xeerarka iyo qawaaniinta dadku dhigtay oo waxaana eedeeda iska leh hay’adaha fulinta sharciga, “waa qayb ka mid ah hadaladii Deni!”
Marka ay halkaa botorinayso, waxa aan Deni u sheegayaa in dadka uu la hadlayaa aysan waallayn caruurna ahayn. Aan ku xasuusiya e, immisa jeer baad sharciga ku tumateen adiga iyo jaallayaashaaba? Idinku sharcigaad ka sarraysaan masaakiintanha sharcigaa qabta baad u jeeddaa miyaa? Ma waxa aad rabtaa in sharcigu uusan adiga iyo jaallayaashaana qaban masaakiintana uu qabto?
Ma waxa aad xukunka u IIBSATEEN in aad shicibka danyarta ah ku dulmisaan oo uusan sharcigu idin qaban? Sharciga halloo sinnaado, haddii kale guryahaa la idiinkugu soo galayaa sidii Tunisia iyo meelo badan ka dhacday. Aniguna sharciga aan ku tunto oo ima qaban karo, shacabka danyarta ahna sharcigaa qabanaya ee hay’adaha fulinta sharcigu ha soo qabtaan war maaha.
Midda kale, garsoorkii waxa aad ka dhigtay hay’ad adiga iyo jaallayaashaa u adeega. Baarlamaankii waxa aad oo u burburisay in uu idinka idiin adeego. Saw marka adigu koow kama tihid dadka aad ku sheegtay kuwo xun ama mufsiddin ah oo ku xad gudbaaya xeerarka iyo qawaaniinta dadku dhigtay ee aad BOOLISKA iyo GARSOORKA u diraso? Sidaa daraadeed, adigu marka hore sharciga iyo qawaaniinta dadku dhigtay ee mid federaal iyo maamulba leh u hoggaansanoow, markaa dadka soo hor istaaga.
Kaaf iyo kale dheeri!!!!
Deni wuxuu kahadlayaa dhir kaharay iyo qashin magaalada dhexyaal iyo sidii qoryaha lashito koronto loogu badelilahaa? Waa wax fiican oo tusaysa heerka puqtland marayso waxaan leeyahay guul iyo gobonimo.
Lkn Deniyaw waxaad ogaataa inaad lamid tahay nin doontuu saarnaa dhinicii kale biyo kasoogaleen oo TV daartay!! Shalay waxaa laysku laayey wiilal soomaaliyeed oo wax magarato ah waxa keenayna adaa qayb ka ah! Marka taraqa aad gedo kashiday bal aynu aragno meeshuu kudamo. Armaad garowe kacarartaa?